04/09/2021 - ALANZAYAR
အွန်လိုင်းတွင် ပျံ့နှံ့ခဲ့သော အုပ်စုဖွဲ့မုဒိမ်းကျင့်ခံရသူမှာ အလှမယ် မြတ်သီရိလွင် ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်လာ
အွန်လိုင်းတွင် ပျံ့နှံ့ခဲ့သော အုပ်စုဖွဲ့မုဒိမ်းကျင့်ခံရသူမှာ အလှမယ် မြတ်သီရိလွင် ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်လာ မြန်မာနိုင်ငံ 2020 ရွေးကောက်ပွဲအပီးတွင် မဲမသမာမှုများရှိသည်ဟု စွပ်စွဲကာ စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းယူခဲ့ပါသည်။ စစ်တပ်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို လက်မခံနိုင်ကြသောပြည်သူလုထုကြီးမှ တခဲနက်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် စစ်တပ်မှ ဆန္ဒပြသူများ အပြည့်မဲ့ပြည်သူများအား ဖမ်းဆီးခြင်း သတ်ဖြတ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်လာခဲ့ရာ […]
လုံးဝထင်မထားတဲ့သတင်းကြီး ပြည်သူတွေလုံးဝမျှော်လင့်မထားတဲ့ သတင်းထူးကြီးတက်လာပြီ ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး….. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ပြထားသည်….။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို လုံးဝထင်မထားတဲ့သတင်းကြီး ပြည်သူတွေလုံးဝမျှော်လင့်မထားတဲ့ သတင်းထူးကြီးတက်လာပြီ ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး….. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ပြထားသည်….။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို လုံးဝထင်မထားတဲ့သတင်းကြီး ပြည်သူတွေလုံးဝမျှော်လင့်မထားတဲ့ သတင်းထူးကြီးတက်လာပြီ ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး….. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ပြထားသည်….။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို လုံးဝထင်မထားတဲ့သတင်းကြီး ပြည်သူတွေလုံးဝမျှော်လင့်မထားတဲ့ သတင်းထူးကြီးတက်လာပြီ ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး….. […]
ဆိုက်ကားနင်းပြီး ကျောင်းထားပေးခဲ့သောဖခင်ကြောင့် ဘွဲ့ရပြီးသည့်အချိန်တွင် ရှက်ရွံ့အားငယ်နေခြင်းမရှိဘဲ ဘွဲ့နှင်းသဘင်သို့ ဖခင်နှင့်အတူ ဆိုက်ကားဖြင့်တက်ရောက်ခဲ့သည့် ကောင်မလေး သားသမီးတို့အနေဖြင့် မိဘတို့၏ကျေးဇူးကို သိတတ်ခြင်းဟာ လောကတွင် ဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံးသော.အခိုက်အတံ့လေးပင်ဖြစ်ပေသည်။မိဘတို့ကို ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့စေခြင်းဟာလည်း ကောင်းမွန်သော ကျေးဇူးဆပ်ခြင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်ပေသည်။ ယခုတွင်လည်း Sandro Estefani Ramosဆိုသည့်ကောင်မလေးဟာ သူကိုဆိုက်ကားနင်းပြီး ကျောင်းထားပေးခဲ့သည့်ဖခင်၏အလုပ်ကြောင့် အားငယ်နေခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ဖခင်၏ ပင်ပန်းစွာလုပ်ကိုင်နေရမှုဟာ […]
လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုပြောပြလာတဲ့စစ်သား တပ်ထဲစစ်သားတွေရိပ်ခါငတ်ပြီး သေကုန်ကြောင်းပြောလာတဲ့ မအလရဲ့ တပ်သားတစ်ယောက်… အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အားဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုပြောပြလာတဲ့စစ်သား တပ်ထဲစစ်သားတွေရိပ်ခါငတ်ပြီး သေကုန်ကြောင်းပြောလာတဲ့ မအလရဲ့ တပ်သားတစ်ယောက်… အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အားဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုပြောပြလာတဲ့စစ်သား တပ်ထဲစစ်သားတွေရိပ်ခါငတ်ပြီး သေကုန်ကြောင်းပြောလာတဲ့ မအလရဲ့ တပ်သားတစ်ယောက်… အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အားဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုပြောပြလာတဲ့စစ်သား တပ်ထဲစစ်သားတွေရိပ်ခါငတ်ပြီး သေကုန်ကြောင်းပြောလာတဲ့ မအလရဲ့ […]
မအိုင်းရင်း ပွဲကြမ်းပြီ…. ကဲ live လွင့်မယ် တရုတ်ရဲ့ မြန်မာအပေါ်စေတနာတွေပေါ့ ပြီးတော့ ကယားမှာ ဖြစ်တဲ့ သတင်ကောင်းလေးလည်း ပြောမယ်…. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အားဖော်ပြထားသည်။…. မအိုင်းရင်း ပွဲကြမ်းပြီ…. ကဲ live လွင့်မယ် တရုတ်ရဲ့ မြန်မာအပေါ်စေတနာတွေပေါ့ ပြီးတော့ ကယားမှာ ဖြစ်တဲ့ သတင်ကောင်းလေးလည်း ပြောမယ် […]
မကြာမီ ဂျပန်ဖိုက်တာအိုကာမီနဲ့ ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်လာတော့မယ် အောင်လအန်ဆန်း…
မကြာမီ ဂျပန်ဖိုက်တာအိုကာမီနဲ့ ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်လာတော့မယ် အောင်လအန်ဆန်း… အောင်လရဲ့အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ ပွဲကောင်းတစ်ပွဲက ဂျပန်ဖိုက်တာကြီး အိုကာမီနဲ့ဖြစ်လာနိုင်လာမလားအောင်လနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ ပွဲကောင်းတစ်ပွဲက ဂျပန်ဖိုက်တာကြီး အိုကာမီနဲ့ဆိုတာ သိုင်းလောက သားများအကြား လူပြောများ နေကြပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့လဲ ယင်းပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်များအား ပရိသတ်ကြီးထံပါး တင်ဆက်ရေးသား ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း […]
ခင်ပွန်းအတွက် ဘီယာဝယ်ပေးရာမှ သိန်း၅၀၀ ပေါက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး(လင်ကိုချစ်လို့ အကျိုးပေးကောင်းတာပေါ့တဲ့)
ခင်ပွန်းအတွက် ဘီယာဝယ်ပေးရာမှ သိန်း၅၀၀ ပေါက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး(လင်ကိုချစ်လို့ အကျိုးပေးကောင်းတာပေါ့တဲ့) လင်ကို ချစ်တာလေ အကျိုးပေးကောင်းတာပေါ့ ရန်ကုန်တိုင်း ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိစတိုးဆိုင် တဆိုင်မှ မြန်မာဘီယာ ဝယ်ယူခဲ့သော ဒေါ်ခင်စန်းရွှေ ဆိုသူသည်မြန်မာဘီယာမှ ဆုချီးမြင့်သော သိန်း၅၀၀ ဆုကြီးကို ကံထူးသွားခဲ့သည်။ Stay Homeကာလအိမ်မှာပဲ ဘီယာသောက်ရန်လင်ယောင်္ကျား ဖြစ်သူကို ဝယ်ပေးခဲ့ရာတံမြက်စည်းလှည်းချိန်တွင် အဖုံးအားတွေ့ပြီးကံထူးရှင် […]
အကြီးမားဆုံးမက်မောစရာတစ်ခုကြောင့် အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်နေရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ PDF တပ်သားတစ်ဦး
အကြီးမားဆုံးမက်မောစရာတစ်ခုကြောင့် အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်နေရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ PDF တပ်သားတစ်ဦး D Day လို့ လူအများကြားရေပန်းစားနေတဲ့ နေ့စွဲပေါင်းများစွာကြားမှာ PDF တွေလည်း အတော်လေးကို ဗျာများရပါတယ်။ နေ့ရက်အတိအကျခေါ်ပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာ D Day ဆိုတာ နီးရက်နဲ့ဝေးနေဆဲပါပဲ။ လတ်တလောမှာတော့ ပြောက်ကျားစနစ်နဲ့သာ တိုက်နေရပြီး ရတဲ့နည်းနဲ့တော်လှန်နေခဲ့ကြပါတယ်။ […]
အားလုံးအတွက် အထူးသတင်းကောင်းကြီးလာပြီ တရုပ်နယ်စပ်တိုက်ပွဲအနီး စစ်ကောင်စီဘက်မှ တပ်သား ၂၀ ကျော်ကြဆုံးကြောင်းသိရပါတယ်။ အပြည့်အစုံအား အောက်ကရုပ်သံဖိုင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို အားလုံးအတွက် အထူးသတင်းကောင်းကြီးလာပြီ တရုပ်နယ်စပ်တိုက်ပွဲအနီး စစ်ကောင်စီဘက်မှ တပ်သား ၂၀ ကျော်ကြဆုံးကြောင်းသိရပါတယ်။ အပြည့်အစုံအား အောက်ကရုပ်သံဖိုင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို အားလုံးအတွက် အထူးသတင်းကောင်းကြီးလာပြီ တရုပ်နယ်စပ်တိုက်ပွဲအနီး […]
အမျိုးသမီး ပုံစံအသီးတွေသီးတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ သစ်ပင် (ရုပ်သံ)
အမျိုးသမီး ပုံစံအသီးတွေသီးတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ သစ်ပင် (ရုပ်သံ) ထိုင်းနိုင်ငံမှာပေါက်ရောက်လျှက်ရှိတဲ့ သစ်ပင်တစ်ပင်ကနေ အမျိူးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံ အသီးတွေ သီးနေတဲ့ သတင်းဟာ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးသတင်း ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုအပင်မျိုးကို မြန်မာ့ဒဏ္ဍာရီ ပုံပြင်တွေထဲမှာလည်း ရှိခဲ့ဖူးပြီး သူယောင်မယ်အပင်-လို့ ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပင်ကို ထိုင်းဘာသာစကားနဲ့ Nariphon လို့ […]